सवारी साधनका कारण दशै दशा नवनोस भन्नेमा हामी सचेत छौ । | Yatra Khabar
Home अन्तर्वार्ता सवारी साधनका कारण दशै दशा नवनोस भन्नेमा हामी सचेत छौ ।
सवारी साधनका कारण दशै दशा नवनोस भन्नेमा हामी सचेत छौ ।
on: June 06, 2015 In: अन्तर्वार्ता
श्चिम नेपाल बस ब्यबसायी संघ बुटवलमा प्रधान कार्यालय रहेको नेपालको यातायात ब्यबसायीहरुको छाता संस्था हो । २०२६ सालमा स्थापना भएको उक्त संस्थामा हाल करीव २४ सय सवारी साधन आबद्ध छन । बुटवल लाई केन्द्रबिन्दु मानेर देशभरी सडक पुगेका क्षेत्रमा यातायात सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ । यात्रुहरुको अत्याधिक चाप हुने दशैको सेरोफेरोमा उक्त संस्थाले यात्रुहरुको चापलाई कसरी ब्यबस्थापन गरेको छ भन्ने बिषयमा यात्राखवर का लागी भगवती पाण्डेले संघका महासचिव जिवन कुमार बन्जाडे संग गरेको कुराकानी
दशैको बेला हुने यात्रुको चापलाई सहज यातायात सेवा दिन के तयारी छ ?
स्वभावीक रुपले चाडपर्वका बेला यात्रु हरुको चाप बढी हुन्छ र नेपालीहरुको महान चाडको रुपमा रहेको बिजया दशमीको अवसरमा अन्य समय भन्दा यात्रुहरुको आवत जावत बडी हुने गर्छ त्यस कुरालाई मध्यनजर गरेर हामीले सवारी साधन थप्ने र कुनै पनि यात्रु लाई टिकट बिना यात्रा गर्न नपर्ने बातावरण तयार गर्न लागी परेका छौ तर यस बर्षको बर्षा अलि लामो भएका कारण केही पहाडी सडकमा सवारी साधन पठाउन सकिएको छैन हामी सम्वन्धीत सरोकारवालाहरु संग समन्वय गरेर सडक मर्मत गरेर गाडी पठाउने गरी रहेका छौ
कसरी ब्यबस्थापन गर्दै हुनु हून्छ ? सवारी थप्नु हुन्छ या त्यसैमा पठाउनु हुन्छ ?
यो संस्था यस क्षेत्रको गहना हो हामी मेची देखी महाकाली उत्तर देखि दक्षिण सम्म सेवा दिई रहेका छौ । आहिले हामी संग भएका सवारी साधनले एकै पटकमा करिव एक लाख यात्रु लाई सेवा दिन सक्छन तर हामी संग दैनिक सरदर २० हजार यात्रु पनि पुगनपुग हुन्छन । त्यसले गर्दा हामी यात्रुलाई सहज सेवा दिन सकिन्छ भन्नेमा ढुक्क छौ । हो चाडवाडका बेला यात्रु स्वभावीक रुपले बढछन हामीले त्यसलाई गम्भिरतापुर्वक लिएका छौ । यात्रुले सवारी साधन नपाएर घर जान पाईएन भन्ने अवस्था आउन दिदैनौ खाली बस्ने सवारी साधनलाई यात्रुको चापका आधारमा थपेर पठाउछौ । यस क्षेत्रमा मात्र होईन काठमाण्डौ देखी महेन्द्रनगर सम्म र मेचीको काकडभित्ता सम्म गाडि पठाएका छौ यस बर्ष हामी नियमीत चल्ने भन्दा ४ सय पचास गाडी दैनिक थपेर सेवा दिएका छौ ।सर्वसाधरण यात्रुले कसरी सहज सेवा पाउने ? सधै टिकट सकियो भन्ने मात्र सुन्न पाईन्छ ?
हामीले अग्रीम टिकट बुकीङ्क खुल्ला गरेका छौ यो चाडमा धेरै यात्रुले यात्रा गर्छन र भिडभाडमा यात्रुहरु दलालको चक्करमा पर्न सक्छन भन्ने कुुरालाई ध्यानमा राखी बिगतका बर्षहरुमा जस्तै यस बर्ष पनि करिव १५ दिन अघि नै टिकट बुकिङ्क खुल्ला राखेका छौ । सर्वसाधारणले बस पार्क र बिभिन्न ठाउमा रहेका हाम्रा काउण्टरहरु बाट टिकट खरिद गर्न पाउने ब्यबस्था मिलाएका छौ । यात्रुका आधारमा हामी सवारी साधन थपेर पनि सेवा दिन तयार छौ । यस पटक टिकट सकिने छैन
गाडि थप गर्दा कसरी गर्नु हुन्छ जुन रुटमा चल्ने हुनै तिनै थप्नु हुन्छ या अन्य गाडी थप्नु हुन्छ ?
हामी जुन क्षेत्रमा जुन गाडी चल्छ त्यही क्षेत्रमै थपेका छौ । तर बिडम्वना के छ भने नियमित क्युमा चल्नेहरुले दोहोर यात्रु टिकट काटेर जान पाउछन तर थपिएको क्यु मा जाने बसले एकतर्फि मात्र यात्रु बोक्ने हो । बुटवल बाट काठमाण्डौ गएर तम्घास फर्किदा उक्त गाडिको ३३ हजार रुपैया खर्च आउछ । तर थपेको गाडी काठमाण्डौ यात्रु लिन जादा खालीखाली जानु पर्छ पर्किदा ३६ जना यात्रु लिएर आउने हो । त्यती यात्रु बोकेर हिडने गाडीका मालिकले दशै मनाउने खर्च जुटाउन सक्दैन तिनका बाल बच्चालाई दशै आयो आएन थाहै हुदैन ।
दशैका समयमा सवारी साधन सञ्चालनको मुल समस्या केहो ?
समस्या के छ भने अघिल्लो दिन ५ बजे काठमाण्डौ बाट छुटेको बस भोलिपल्ट ११ बजे मात्र बुटवल आईपुग्छ सडकको अवस्था यती दर्दनाक छ । सवारी साधनको खर्च थपिने मात्र होईन यसले गर्दा सडक दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ । जव चाडबाड लाग्योृ सवैका आखा यातायात ब्यबसायी तर्फ सोझिन्छन । सडक मर्मत पनि यही बेला गर्न थाल्छन कमसेकम सवारी साधनको चाप भै रहने सडकहरुको मर्मत गर्नै समय चाडवाड नपारे राम्रो हुन्थ्यो ।
चाडपर्वको बेला दुर्घटना हुने गर्छन त्यसलाई नियन्त्रण गर्न के योजना छन ?
चाडवाड भनेर यात्रु बढे पनि हामीले सिट संख्या भन्दा बढी यात्रु राखेका छैनौ । त्यसले सवारी धनीहरुलाई राहत दिन सकेको छैन जसका कारण ब्यबसायीहरु असन्तुष्ट पनि हुन सक्नु हन्छ किनकी वहाहरुको लाखौको लगानीको प्रतिफल पाउन सक्नु भएको छैन तर संघको दुर्घटना न्युनिकरणको अभियानलाई साथ दिनु पर्छ भनेर लाग्नु भएको छ त्यसमा हामी एकताबद्ध भएका छौ । सवारी साधनका कारण दशै दशा नवनोस भन्नेमा हामी सचेत छौ ।
यात्रुको चाप र भिड भाडको फाईदा उठाएर ब्यबसायीहरुले चर्को भाडा असुल्ने र एउटै सिटमा २ जनालाई टिकट बेच्ने गरेको गुनासो आउछ नी ?
यो गुनासो कुनै बेला थियो होला तर अहिले छैन हामी के कुरामा सचेत छौ भने यात्रु हाम्रा भगवान हुन हामी तिनको सम्मान गर्छौ । यात्रुहरु संग हाम्रो के आग्रह छ भने जो पायो त्यसै संग टिकट लिने गर्नु भएन सम्वन्धीत काउण्टर बाट टिकट खरिद गर्नु पर्यो हामी हाम्रा कर्मचारी लाई तोकीए भन्दा बढी भाडा नलिन निर्देशन गरेका छौ । रह्यो कुरा एउटा सिटमा दूई जनालाई टिकट दिने यस्तो गुनासो हामीकहा आएको छैन र हामी कहिले काही भिडभाडमा त्यस्तो पर्न गएको भए त्यस्ता टिकट ब्यबस्थापन गरेर यात्रुलाई सहज यात्रा गर्ने बातावरण तयार गरी दिएका छौ । दोहोरो टिकट बेच्ने नियत होईन । केही बर्ष यता यस्ता समस्या आउन नपाउन भनेर हामीले अन्य सरोकारवालाहरु संग मिलेर यात्रु सहायता कक्ष सञ्चालन गरेका छौ नियमित अनुगमन गरेका छौ यस बर्ष यस्ता कुनै उजुरी र गुनासो आएका छैनन ।
आन्दोलनमा जानु हाम्रो बाध्यता हो
जरिवाना गर्दैमा गल्ति कम हुन्छ भन्ने हुंदैन
सस्तोका लागी बजार चाहार्ने स्वभावले नक्कली सामानले बजार पाएका छन
मुलुकले निकास पाएपछि हामीले पनि निकास पाउने बिश्वासका साथ चुप लागेर बसेका हौ